၂၀၂၂ ပေကျင်း ဆောင်းရာသီအားကစားပွဲများအတွက် အိုလံပစ်မီးရှူးတိုင် တရုတ်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိ - Xinhua News Agency
ပေကျင်း၊ အောက်တိုဘာ ၂၀ ရက် (ဆင်ဟွာ)
၂၀၂၂ ပေကျင်း ဆောင်းရာသီအားကစားပွဲများအတွက် အိုလံပစ်မီးရှူးတိုင်သည် ဂရိနိုင်ငံ အေသင်မြို့မှ တရုတ်နိုင်ငံ မြို့တော် ပေကျင်းသို့ အောက်တိုဘာ ၂၀ ရက် နံနက်ပိုင်းက ရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။မီးရှူးတိုင်ကြိုဆိုခြင်း အခမ်းအနားကို ၂၀၀၈ နွေရာသီအိုလံပစ် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပခဲ့သော’Bird’s Nest’ အမျိုးသားအားကစားရုံအနီး ပေကျင်း အိုလံပစ်တာဝါတွင် ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ဂရိနိုင်ငံ အေသင်မြို့ရှိ Panathenaic အားကစားရုံတွင် ၂၀၂၂ ပေကျင်း ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်အားကစားပွဲအတွက် အိုလံပစ်မီးရှူးတိုင် လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်း အခမ်းအနားအတွင်း ဂရိအိုလံပစ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ Spyros Capralos ထံမှ ၂၀၂၂ ပေကျင်းအိုလံပစ် အထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Yu Zaiqing (ယာ) က မီးရှူးတိုင်အား လက်ခံရယူနေသည်ကို အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
၂၀၂၂ ပေကျင်း ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်အားကစားပွဲအတွက် အိုလံပစ်မီးရှူးတိုင် လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်း အခမ်းအနားအတွင်း ၂၀၂၂ ပေကျင်းအိုလံပစ် အထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Yu Zaiqing က မိန့်ခွန်းပြောကြားနေသည်ကို အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
၂၀၂၂ ပေကျင်း ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်အားကစားပွဲအတွက် အိုလံပစ်မီးရှူးတိုင် လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်း အခမ်းအနားအတွင်း ၂၀၂၂ ပေကျင်းအိုလံပစ် အထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Yu Zaiqing က အိုလံပစ်မီးရှူးတိုင်ပါဝင်သော လက်ဆွဲမီးအိမ်ကိုင်ဆောင်ထားသည်ကို အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
၂၀၂၂ ပေကျင်း ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်အားကစားပွဲအတွက် အိုလံပစ်မီးရှူးတိုင် လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်း အခမ်းအနားအတွင်း ၂၀၂၂ ပေကျင်းအိုလံပစ် အထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Yu Zaiqing က အိုလံပစ်မီးရှူးတိုင်အား ကိုင်ဆောင်ထားသည်ကို အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
အဆိုပါ မီးရှူးတိုင်အား ဂရိနိုင်ငံ အနောက်ပိုင်း Ancient Olympia တွင် အစဉ်အလာအတိုင်း မီးထွန်းညှိခြင်းအခမ်းအနား၌ အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်က မီးထွန်းညှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အေသင်မြို့ရှိ Panathenaic အားကစားရုံတွင် ၂၀၂၂ ပေကျင်းအိုလံပစ်အားကစားပွဲဖြစ်မြာက်ရေးစီစဉ်သူများထံ အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက်က လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Source: Xinhua| 2021-10-20 06:31:25|Editor: huaxia
BEIJING, Oct. 20 (Xinhua) — The Olympic flame for the Beijing 2022 Winter Games has landed in the Chinese capital on Wednesday morning after being flown from Athens, Greece.
A welcome ceremony is due to be held later at the Beijing Olympic Tower near the ‘Bird’s Nest’ National Stadium, which hosted the opening ceremony of the 2008 Summer Olympics.
The flame was ignited Monday inatraditional lighting ceremony at Ancient Olympia in western Greece, and was handed over on Tuesday to the Beijing 2022 organizers at the Panathenaic stadium in Athens. Enditem
1- Special representative and Vice-President of Beijing 2022 Yu Zaiqing (R) receives the torch with the Olympic Flame from President of the Hellenic Olympic Committee Spyros Capralos during the handover ceremony of the Olympic Flame for the Beijing 2022 Winter Olympic Games at the Panathenaic Stadium in Athens, Greece, Oct. 19, 2021. (Xinhua/Zheng Huansong)
2-Special representative and Vice-President of Beijing 2022 Yu Zaiqing (R) receives the torch with the Olympic Flame from President of the Hellenic Olympic Committee Spyros Capralos during the handover ceremony of the Olympic Flame for the Beijing 2022 Winter Olympic Games at the Panathenaic Stadium in Athens, Greece, Oct. 19, 2021. (Xinhua/Zheng Huansong)
3-Special representative and Vice-President of Beijing 2022 Yu Zaiqing deliversaspeech during the handover ceremony of the Olympic Flame for the Beijing 2022 Winter Olympic Games at the Panathenaic Stadium in Athens, Greece, Oct. 19, 2021. (Xinhua/Zheng Huansong)
4- Special representative and Vice-President of Beijing 2022 Yu Zaiqing holds upalantern containing the Olympic Fame during the handover ceremony of the Olympic Flame for the Beijing 2022 Winter Olympic Games at the Panathenaic Stadium in Athens, Greece, Oct. 19, 2021. (Xinhua/Zheng Huansong)
5- Special representative and Vice-President of Beijing 2022 Yu Zaiqing (R) presents the torch with the Olympic Flame during the handover ceremony of the Olympic Flame for the Beijing 2022 Winter Olympic Games at the Panathenaic Stadium in Athens, Greece, Oct. 19, 2021. (Xinhua/Zheng Huansong)
6- The Chinese national flag is seen during the handover ceremony of the Olympic Flame for the Beijing 2022 Winter Olympic Games at the Panathenaic Stadium in Athens, Greece, Oct. 19, 2021. (Xinhua/Zheng Huansong)